Tyre Inflator ၊
Inflator နှင့် အလင်း
လိပ်စာ- အမှတ် ၅ Xiahengdai လမ်း၊ Xiaodong စက်မှုဇုန်၊ Yuyao၊ Zhejiang၊ တရုတ်
အီးမေးလ်- jialin#yyjiaqiao.com (ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ်ပို့သည့်အခါတွင် @ ဖြင့် # ပြန်လုပ်ပါ)
အထက်က ငါတို့စက်ရုံလိပ်စာ။ ဆက်သွယ်ရန် page ကိုလည်း စစ်ဆေးပေးပါ။
Compressor အလုပ်လုပ်တာ နှေးတယ်။
မေး - ကွန်ပရက်ဆာက အလုပ်လုပ်တာ နှေးတယ်၊ အသံတွေ ခဏခဏ ရပ်သွားတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဗီဒီယို
A- 1) ကားစတင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ၊ အသံသည် ပါဝါပြတ်သွားပုံပေါ်ပါသည်။
2) ပါဝါကောင်းပါက မော်တာပေါ်ရှိ ဝက်အူကြပ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
၃) ဂီယာပေါ်တွင် ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပါ။
ကားတာယာကို လေဖြည့်ရန် မအောင်မြင်ပါ။
မေး- မင်္ဂလာပါ ပန့်မှာ ပြဿနာရှိလို့ သားတို့ စက်ဘီးတာယာလေမှုတ်ဖို့ သုံးတယ်၊ အဲဒါက ပြဿနာမရှိဘူး၊ မနေ့ညက ကားတာယာထဲကို လေနည်းနည်းထည့်သွားတယ်၊ အဲဒါလုပ်နေတဲ့အတွက် စက်ပိတ်သွားတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဆူညံသံတွေကို ဆွဲချပြီး မစုပ်ရဲဘူး။ ကားကို ကားဂိုဒေါင်ကို လေကောင်းလေသန့်ယူရတယ်။
A- မည်သည့် pump မှ မဖောင်းထွက်ပါက အောက်ပါအချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေလဲဆိုတာ နားလည်နိုင်ဖို့က ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
မအောင်မြင်သော အခြေအနေဖော်ပြချက်၊ ဥပမာ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆူညံမှုမရှိခြင်း၊ စတင်ခြင်းမပြုခြင်း၊ လိုချင်သောဖိအားသို့ တိုးမပေါက်ခြင်း စသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကားတာယာ လေဖြည့်သွင်းများအားလုံးသည် အလွန်ကြီးသောတာယာမှလွဲ၍ ကားတာယာအများစုကို လေဖြည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အလွန်မြင့်မားသောဖိအားကို ဖြည့်သွင်းလိုသောဆန္ဒ (>3.5bars) မှလွဲ၍ ကားတာယာအများစုကို ဖောင်းကားနိုင်သည်။ Inflating Speed ​​ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ inflator Model တစ်ခုစီ၏ သတ်မှတ်ချက်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် A16mm core သည် 195/60R14 ကားတာယာကို 8-9 မိနစ်ခန့်အတွင်း 2bars အထိ ပေါက်စေသည်။ 19mm core သည် 195/60R14 ကားတာယာကို 7-8 မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် 2bars အထိ ပေါက်စေသည်။ ဖိအားမြင့်ခြင်းဆိုသည်မှာ အကြိမ်ရေပိုများသည်၊ ပိုကြီးသောတာယာသည် အချိန်ပိုပေးသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးပါ။ ပိုမြန်ပြီး အားကောင်းချင်ရင်တော့ သတ္တုလေကို ကွန်ပရက်ဆာကို စမ်းကြည့်ပါ။
ဆူညံသံများ ဖြစ်နိုင်ချေများသောကြောင့် အဖြေမရနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ အော်တိုရပ်စ်ဖိအားကို 30PSI တွင်ထားကာ လေကွန်ပရက်ဆာရေပိုက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်ထားပါ၊ ထို့နောက် လေကွန်ပရက်ဆာကိုဖွင့်ပါ။ ဖောင်းပွပြီး အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားပါသလား။ မဟုတ်ပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
အဲယားကွန်ပရက်ဆာ ဘုံဖောင်းမေးခွန်းများ - 11691
1) ဆူညံသံရှိ၍ ဖောင်းကား၍မရပါ။
အခြေအနေဖော်ပြချက်သည် အခြေခံအားဖြင့် အောက်ပါဗီဒီယိုဖြစ်သင့်သည်။
အထက်ပါ ဆူညံသံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက် -
A. တာယာအတွင်းရှိ ဖိအားသည် မြင့်မားနေပြီး လေစုပ်စက်၏ စတင်ပါဝါ မလုံလောက်ပါ။
ဖြေရှင်းချက် --> ကားကိုစတင်ပြီးနောက်အသုံးပြုပါ။
B. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း၊ ထုတ်ကုန်၏အတွင်းပိုင်းရွေ့လျားမှုသည် ရွှေ့ပြောင်းသွားပြီး မော်တာသည် အိမ်ရာအတွင်း၌ ပိတ်မိနေပါသည်။
ဂ။ မော်တာ ဂီယာဝတ်ခြင်း။
ဖြေရှင်းချက် --> မော်တာကို အစားထိုးပါ။
D. ချိတ်တံက ကပ်နေတယ်။
ဖြေရှင်းချက် --> အခွံကိုဖွင့်ပြီး ချိတ်ဆက်တံကို တပ်ဆင်ပါ။
2) ထုတ်ကုန်ကို ကားဗို့အားထိန်းညှိမှုထဲသို့ ထည့်သွင်းသည့်အခါ အလုပ်မလုပ်သည့် လက္ခဏာမရှိပါ။ ကားနှစ်စီးကို ပြောင်းပြီးရင် ဝယ်သူက မဖောင်းနိုင်သေးဘူး။
A. စီးကရက်မီးခြစ်ရှိ ဖျူးသည် လွင့်နေသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ နာရီသည်တောက်ပခြင်းမရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပါဝါကြိုးရှိ fuse ကိုစစ်ဆေးပြီး အစားထိုးပါ။
B. အချို့မော်ဒယ်များ၏ စီးကရက်မီးခြစ် fuse အရွယ်အစားသည် သေးငယ်သောကြောင့် စတင်ချိန်တွင် ပါဝါပြတ်တောက်သွားပါသည်။
ဂ။ အတွင်းဝိုင်ယာကြိုးများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။
3) ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ မော်တာပိတ်ဆို့ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
A. သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက 1) အလားတူ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံကို ကျေးဇူးပြု၍ 1) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး စစ်ဆေးပါ။
B. Power supply ဗို့အား 12V DC မဟုတ်ပါ။
C. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း၊ ထုတ်ကုန်၏အတွင်းပိုင်းရွေ့လျားမှုသည် ရွှေ့ပြောင်းသွားပြီး မော်တာသည် အိမ်ရာအတွင်း၌ ပိတ်မိနေပါသည်။
EPE၊ ရေမြှုပ်၊ ကတ်ထူသေတ္တာများနှင့် ယက်လုပ်ဝတ်ဆင်ခြင်း။
ပုလဲချည်၊ အမြှုပ်များ၊ ပုံးများနှင့် ယက်လုပ်ထားသော အိတ်များ စသည်တို့ကို သယ်ယူစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းများ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီနှင့် မျက်ရည်ယိုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အကာအကွယ်အတွက် အသုံးပြုသည်။
EPE၊ အမြှုပ်များ၊ ကတ်ထူသေတ္တာများနှင့် ထုတ်ကုန်များ သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ်အတွင်း ထုပ်ပိုးမှုနှင့် အကာအကွယ်အတွက် ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် စုတ်ပြဲခြင်းတို့ကို မထိခိုက်စေရန်။
Polyethylene Foam Sheet (ဖလင်) ကို ပုလဲချည်ဟုလည်း ခေါ်သည်။
Polyethylene foamed sheet (film) ကို ပုလဲချည်ဟုလည်း အမည်တွင်သည်။
လိပ်စာအမှတ် 1279 Tanjialing အနောက်လမ်း၊ Lanjiang လမ်း၊ Yuyao၊ Zhejiang၊ တရုတ်